Ben & Jerry's Israel boycott na-efu ụlọ ọrụ nne na nna ya $111 nde
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ben & Jerry's Israel boycott na-efu ụlọ ọrụ nne na nna ya $111 nde
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • investments • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ben & Jerry's Israel boycott na-efu ụlọ ọrụ nne na nna ya $111 nde.
Nnukwu ego ezumike nka New York, nke na-etinye ihe karịrị nde $ 800 n'ofe Israel, adọọlarị ụlọ ọrụ ahụ aka na ntị na July na ikpuchi ahụ ga-emerụ itinye ego nke ya na Israel.
Nnukwu ice-cream nke dị na Vermont Ben & Jerry chere nkwụghachi azụ ego n'ihi nchụpụ Israel.
New York State Common Retirement Fund weghaara ikike nha anya na ụlọ ọrụ nne na nna Ben & Jerry.
Mwepu a, ka otu ahụ kwuru, na-emebi iwu nke ya megide mmegharị nke BDS (iwepụ, mgbagha, na mmachi).
New York State Common Retirement Fund mara ọkwa na ọ ga-ewepụ ihe onwunwe nhatanha na ya Ben & JerryỤlọ ọrụ nne na nna, Unilever PLS, maka itinye aka na ụlọ ọrụ na mmemme BDS mgbochi Israel.
"Mgbe nyochachara nke ọma," ego ahụ kwuru na ọ ga-ewepụ ikike nha nha na Unilever PLS. "Ntụle anyị nke ọrụ nke ụlọ ọrụ, na enyemaka ya Ben & Jerry's, hụrụ na ha na-eme ihe omume BDS n'okpuru amụma ego ezumike nka anyị," Tom DiNapoli, onye na-ahụ maka ego ezumike nka, kwuru maka mkpebi ya ibelata njikọ ya na nnukwu ice-cream na-emesapụ aka nke Vermont.
Mwepu a, ka otu ahụ kwuru, na-emebi iwu nke ya megide mmegharị BDS (iwepụ, nchụpụ, na mmachi).
Nnukwu ego ezumike nka New York, nke na-etinye ihe karịrị nde $ 800 n'ofe Israel, adọọlarị ụlọ ọrụ ahụ aka na ntị na July na ikpuchi ahụ ga-emebi itinye ego ya na ya. Israel.
The boycott, nke hụrụ Ben & Jerry na-ajụ ire ice cream na 'Palestine Territories' nke West Bank na East Jerusalem, echewo nnukwu azụ azụ site n'aka ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị omebe iwu US, yana ọtụtụ ndị ọrụ Israel.
Mwepụ ahụ kpatakwara ịkwa emo Ben & JerryOnye rụpụtara Ben Cohen chere ihu na mbido ọnwa a maka nhọrọ nke ebe a ga-ewepụ, ebe ụlọ ọrụ ahụ na-emegide. Israel, ma ọ bụghị steeti dị ka Georgia, nke ndị na-arụkọ ọrụ na-ekwu na ọ nwere nnukwu ikike ịtụ vootu nke ndị omebe iwu Republican kpalitere. Mgbe a jụrụ ya ihe mere ụlọ ọrụ ahụ ewepụghị Georgia, Cohen zara, “Amaghị m.”
"Site n'echiche ahụ, anyị ekwesịghị ire ice cream ebe ọ bụla," ka o kwuru. Ndị na-arụkọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ akọwawo onwe ha dị ka "ndị Juu mpako" ndị na-ekwenyeghị na iwu Israel.
Unilever gbachitere boycott ahụ n'August n'akwụkwọ ozi o degaara ego ezumike nka New York, ya na CEO Alan Jope na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ puku kwuru puku na Israel ma nwee nde mmadụ etinye ego n'ebe ahụ, mana ha anaghị etinye aka na omume nke bọọdụ "nwere onwe".